ဆရာမနှင်းနုအနေနဲ့ကိုယ့်အမေကို ငဲ့ကြည့်ပြီးမှပြောပါ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ဒေါင်းဝေ
ဆရာမနှင်းနုအနေနဲ့ကိုယ့်အမေကို ငဲ့ကြည့်ပြီးမှပြောပါ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ဒေါင်းဝေ 5
ဆရာမနှင်းနု အနေနဲ့မ်ိန်းကလေးချင်းကိုယ်ချင်းစာပါ အကယ်လို့ ကိုယ့်မှာနှမမရှိဘူး သမီး မရှိဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကိုမွေးထားတဲ့ အမေကိုငဲ့ကြည့်ပြီးမှပြောပါလို့ဆိုလိုက်တဲ့ ဒေါင်းဝေ
ဆရာမဂုဏ်ကို မရှိဘဲ အခေါ်ခံနေရတာ မရှက်ဘူးးးလားး သတိထား ခိုက်တယ်
Author — K.F.C.
TV ရှေ့ or ပြည်သူလူထု ရှေ့မှာ သတ်ပြမှယုံ
အဲလိုမဟုတ်ရင် ငွေအင်အားနဲ့ ဘယ်သူမှ
Author — Thang Kilte
He is right! The teacher is lying! The teacher should speak the truth. Most likely the school own son did it.
Author — Mabel Tan
Author — nat sooe than nat sooe than
ရုပ်​ကိုက ခင်​မာမြင့်​ရုပ်​နဲ့ နှင်းနု
Author — phyoeko 77
အဲ့ဒီ ဖားသယ်မမျိုး သိတယ်
Author — chit sonelay
​နှင်းနူ ဆိုတဲ့အနူမ။ နင့်​ဟာနင်​ နင်​လဲ ပူး​ပေါင်းကြံစည်​မှု ​ထောင်​ထဲဝင်​​တော့။
Author — Pai Sao Ang
လူပုံအလယ်မှာ လီးကိုဓါးနဲ့လှီးဖြတ် pမှာသတ်တဲ့ ဥပဒေ ထုပ်လိုက်စမ်းပါ
Author — Oppo A5s
Author — Min Ooဟုတ်တယ်
ဒေါင်းဝေ ကြောသွားတာ ထိရောက်တယ် ကျေးဇူးပါ အားပေးနေပါတယ်နော်
Author — Queen Strong
အဓိက သက်သေ နှင်းနု ၊ အခုဆို ပြည်ထဲရေးက သတ်ပလိုက်ပြီ။ ဘာသက်သေမှ မရှိတော့ဘူး။
Author — Dtah Dtee
​နောင်​မျိုးဆက်​သစ်​ သားငယ်​ သမီးငယ်​များ
ဆရာမ ..နှင်းနု မှာအ​ဖြေရှိ​နေပါတယ်​....
Author — U Than Soe
သက်​ငယ်​မုဒိန်းကို ​သေဒဏ်​​ပေးတာ အ​ကောင်းဆုံးဘဲ
Author — Thandar linn
ကျနော် ကိုလာမေးလိုက်စမ်းပါ ဒီလိုအမူ့ကိစ္စနဲ့ပက်သတ်ပီး ကျနော်ရင်ဘတ်ထဲမှာ ပြည်လျှံနေပြီ ဖွင့်ဟပြောချင်လွန်းလို့ ...
အောင်ကြီးက အလုပ်ပြောထားရုံပဲရှိသေး။ ကိုကိုညီညီက ထုံးစံအတိုင်း အမေနဲ့ ကျောင်းပါသွား။ အိမ်သာနားက ကပ်လျက် အခန်းကျယ်ထဲမှာ ညီအကိုနှစ်ယောက် အပြာကားတွေကြည့်နေပြီး စိတ်တွေကြွ။ မကောင်းတာလုပ်နေတော့ စိတ်မလုံလို့ အပြင်မှာ ။ အဲ့အချိန် မီးမီးလေးကို ရှူးတည်ဖို့ ဆရာမနှင်းနုက လာပို့။ ဆရာမကလဲ အပေါ့သွားချင်တော့ မီးမီးလေးကို အိမ်သာနားမှာ ခန စောင့်ခိုင်း ။ အဲ့အချိန်ကိုက်ုက တံခါးနားမှာ လူရှိမရှိ လာကြည့် မီးမီးလေးကိုတွေ့တော့ စိတ်တွေကြွအထဲခေါ်ပြီး ဟိုဒင်းလုပ်။ ဆ ရာမက အပေါ့သွားရင်းက အလေးသွားချင်တော့ နဲနဲကြာမှထွက်လာ။မီးမီးလေး သူ့ဘာသာ အတန်းပြန်သွားပြီ အထင်နဲ့လာကြည့်။မတွေ့ ။ မတွေ့တော့ အိမ်သာနားကိုကိုညီညီရှိတဲ့ အခန်းကျယ်ကိုပြန်လာရှာ။ တွေ့လိုက်ရတော့ မျက်လုံးပြူုးပီး ကိုက်ုညီညီကိုဆူ။ ပြီးတော့ရေဆေးပေး။ ဖြစ်တာက မနက်ပိုင်း သက်သေတွေဖျောက်ဖို့ အချိန်ရ။ လူစားထိုးဖို့လိုတော့ အောင်ကြီးကို ဒီနေ့အလုပ်စဆင်းရမယ်ဆိုပြီး ၃ နာရီကျော်လောက်သွားခေါ်လာပြီး CCTV ရှေ့ထိုင်ခိုင်းထား။ ဒီမှာအောင်ကြီးက ဒါပါပဲ ။
Author — Pri Lai
ယောင်္ကျားပုံစံပဲနေမှာပါ မခွဲစိတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဖေ့ဘွတ်ဆယ်လီ နေဆန်း
ချစ်သူနဲ့မင်္ဂလာသတင်းကိုပရိသတ်တွေဆီ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ကောင်းထက်ဇော်
Phyu Phyu Htwe 2.0 နဲ့ လှငျ့နပွေီနျော ဆိုတဲ့ ဖွူဖွူထှေး
ကိုခင်လှိုင်ကိုချီရတာ တော်တော်များတယ် ဆိုတဲ့ မေပန်းချီ
မို့မို့မြင့်အောင်ဖက်မှ သင်းသင်းအပေါ် သဘောထား